Espana, Niteraka Hatezerana Ny Fanadihadiana Lalina Sy Ahiahy Manoloana ny Fijoroana Vavolombelona Nataon’ny Niharan’ny Fanolanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2017 2:53 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, English, Português, Français, Español
Soratra eo amin'ireo taratasy avy any ankavia mankany ankavanana: “Matoky anao aho, ranabavy”; “Mino anao aho”; “fanjakan-dehilahy mpamono; mpanao gazety mpiray tsikombakomba”. Vondrona ao Madrida manohana ilay niharan'ny fanolanana. Sary avy amin'ny eldario.es/ MB.CC-BY-SA
Ny 13 Novambra teo no nanamarika ny fiantombohan'ny raharaha fitsarana manohitra ireo atao hoe La Manada (ny fonosana), andian-tovolahy miisa dimy avy ao Seville, Espana, voahenjika noho ny fanolanany tovovavy 18 taona nandritra ilay Fetibe San Fermin tao Pamplona ny alin'ny 7 Jolay 2016.
Niteraka hatezerana sy fiampangàna fitanilàna ara-pananahana ny fanapahankevitry ny mpitsara, tamin'ny nametrahany tsy fahatokisana amin'ny fitantaràn'ny niharan-doza ary nampidirany azy ho amin'ny fitsarana araka ny fijerin'ny vahoaka.
Momba ilay alina iny indrindra, taorian'ireo fankalazàna, nisisika nanatitra an'ilay tovovavy hody tany an-tranony ilay andian-jatovo voampanga. Avy teo, nentin'izy ireo tao amin'ny lalantsaran'ny tranobe iray izy ary teo no naolan'ny efatra tamin'izy ireo raha ilay iray farany kosa nandraikitra izany ho anaty lahatsary miaraka amin'ny fikasana ny hanaparitaka azy io any amin'ny namany. Nalain'izy ireo koa ny findain'ny niharan-doza mba tsy hahafahany miantso vonjy, araky ny tatitra.
Mpivady no nahita an'ilay tovovavy nalemilemy ary niantso ny manampahefana. Ora vitsy taty aoriana, voasambotra ireo dimy lahy ary nentina teo anoloan'ny fitsarana. Nanapaka ny mpitsara fa ho tazonina tsy azo sandaina onitra izy ireo.
Ny andro manaraka izay, nisy antsipirihany bebe kokoa nivoaka. Miantso ny tenan'izy ireo ho “La Manada”, niresaka tamim-paniratsiràna momba ireo ratsy nataony ilay vondrona, am-pihomehezana miaraka amin'ireo namany izay tsy nanatrika ilay fetibe. Hafatra fireharehana tahaka ny hoe “nipaika iray izahay dimy” ary “misy lahatsary”, no nifanakalozan'ireo tao amin'ny vondrona, anisan'izany olona iray avy ao amin'ny polisy ary iray hafa avy ao amin'ny miaramila.
Tolotra iray mitovy natao hifandefasana hafatra no nampiasain'ireo voalaza fa mpanafika mba hiresahana ireo fiomanana ho amin'ny dian-dry zareo hankany Pamplona, manao sangy momba ny fanolanana tahaky ny hoe “tokony hitondra skôpôlômina ve isika?” sy hoe “mila manomboka mitady kloroforma (fanafody fampatoriana), roofies (fanafody mahadomelina iray tarika amin'ny flunitrazepan sy ny rohypnol), tady…”
Fijery mifanohitra eo amin'ny fanekena ny porofo
Tao amin'ny fitsarana, tsy nanaiky ireo hafatra nifanakalozan'izy ireo tao amin'ny Whatsapp ny mpitsara mba ho porofon'ny hetsika natao. Kanefa naka mpitsongo manokana ny fiarovana mba hijerena ny nampiasàna ny tambajotra sosialin'ilay niharan-doza taorian'ilay fanafihana ary neken'ny mpitsara io fampidirana io ho toy ny porofo amin'ny raharaha.
Tao amin'ny fandaharany Cadena Ser, nanontany ny mpanao gazety, Carles Francino:
Fa inona no tena tian'izy ireo haseho tamin'ny fanarahana izay fihetsik'ity tovovavy ity, ity vehivavy ity? Maninona no manintona azy ireo fatratra ny fiainany, ny andavanandrony? Angamba mety misy modelim-pitondrantena ho an'ny vehivavy avy naolana ho atao karazana fanekena an'ilay fanafihana? Ny tena mampalahelo sy mazava be dia mitohy foana ny tsy fahatokisana ny tenin'ny vehivavy milaza ho voaolana (…)
Writer Almudena Grandes also expressed unease about the case:..Naneho ny tsy fahazoany aina momba ilay raharaha koa ilay mpanoratra Almudena Grandes:
Azo heverina fa raha ekena ny porofo avy amin'ny asan'ny mpitsongodia iray momba ny fiainana andavanandron'ny niharan'ny fanolanana dia mitovy amin'ny fanekena, anaty raharaham-pamonoana, ny fijoroana ho vavolombelona manaporofo fa mpanao ratsy izay tokony ho faty ilay maty, mba hahafahan'ny fiarovana hilaza fa misy toejevatra afaka hanalefaka ny toedraharaha.. (…) izay natao hamelezana an'ilay niharan-dozan'ny La Manada, mitondra tsy fahatokisana momba ny fitondrantenany, satria nahasahy nivoaka izy, nandeha nisotro niaraka tamin'ny namany rehefa avy voaolana, fa tsy nijanona nihidy tao an-trano, nitafy gony sy nihosotra lavenona.
Mpanoratra sady mpanao gazety i Antonio Pamliega, izay nalain'ny Al-Qaeda an-keriny, nanoratra taridresaka teo amin'ny “Twitter” miaro ilay niharan-doza, miray hina noho ny ahiahy sy tsiny nihatra taminy nandritra ny fitazonana an-keriny nahazo azy:
Ny Twitter dia tahaka toeram-pisotroana izay ahafahan'ny mpampiasa miteny karazana fanamarihana masiaka izay efa fantatro. Fa tato ho ato, misy fetra mampidi-doza tratra tahaka ny tsy fahatokisana ny fijoroana ho vavolombelona ataon'ny niharan'ny fanolanana satria miezaka ny hiarina izy. Ka mba tia hizara zavatra aho:
— Antonio Pampliega (@APampliega) 15 Novambra 2017
“Mino anao aho”….sa tsia?
Nahatonga adihevitra be teo amin'ny aterineto ny maha-zava-dehibe ny finoana ny tenin'ny niharan-doza mba hisorohana ny fampanginana sy fanilikiliana ireo niharan'ny fanolanana. Namelona ilay tenifototra fampiasa indrindra tahaky ny #Lamanada sy #JusticiaPatriarcal (#FahamarinanaAraPatriarika) ireo mpampiasa aterineto mba hanambaràna hevitra mafonja:
Tsy vitan'ny manolana anay, tsy maintsy ny lehilahy ihany koa aloha no mandidny antsika momba ny fitondrantena, mandritra sy aorian'ny fanolanana. Raha tsy tafahoatra loatra ny fangatahana, mitadiava marimaritra iraisana ary manamboara torolàlana ho an'ny fanolànana ka amin'izay izahay dia tovovavy hendry ary tsy haharikoriko an'izao tontolo izao. #JusticialPatriarcal (#FahamarinanaAraPatriarika)
— Suspiritos (@AgrariaLola) 15 Novambra 2017
Ho an'ireo avy ao amin'ny #LaManada miteny fa tsy nivoaka ny vaovaony ary tsy misy mihaino. Tsy maintsy ho sarotra ny hiteny Tsia sy tsy misy olona manaja an'izany.
Lazaina ho tsy manan-tsiny: hafatra any an'ireo namanareo fa handeha ho any San Fermin miaraka amin'ny fanafody roofies ho an'ny fanolanana mianareo, “nipaika iray izahay dimy” fa “tahaka ny tsy nahatsiaro tena izy”, nalainareo ho lahatsary ilay izy dia nalefanao ary avy eo nalainao ny findainy. Firaisana ara-nofo nekena hoy ry zareo. #JusticiaPatriarcal (#FahamarinanaAraPatriarika)
Ny vondrona Whatsapp #LaManada dia iray amin'ireo vondrona mampihomehy iresahan'ireo lehilahy ‘anaty hanihany’ momba ny vehivavy ho toy ny saribakoly abontsina rivotra, vazivazy momba ny fanolanana, miaraka amin'ny sarinà fitombenana sy nono. Angamba betsaka aminareo no ao anatin'ireny vondrona ireny? Tsy halanareo ve ny fanànana zavatra iraisana amin'ireny bandy ireny?
Azo lazaina ho vitsy ny fiampangàna diso amin'ny fanafihana ara-nofo kanefa ny tetiky ny fiarovana dia naharesy lahatra ny olona sasantsasany hoe nanendrikendrika am-pandisoana an'ilay vondrona ilay vehivavy.
Toy izao no nametrahan'i RPMallorqui azy teo amin'ny “Twitter”:
#LaManada no devoly ary ilay tovovavy no masina, impiry isika no naheno ity tantara ity? Vendrana sy tsy mahay tahaky ny inona ny vahoaka toy ny ondry izay mieritreritra fa tsy mety ho ny mifanohitra amin'izay ilay izy? Izay no mahatonga antsika hanana mpitsara sy didim-pitsarana, ho hitantsika eo….
An'arivony ny mpanao fihetsiketsehana nandeha teny amin'ireo tanàna maro tao Espana tao ambanin'ny teny filamatra “Yo sí te creo” (Mino anao aho), mba hanohanana ilay voalaza fa niharan'ny fanolanana ao amin'ity raharaha ity ary manindry ny filàna ny fanekena ny tenin'ilay niharan-doza.
Kanefa, mbola ho lava ny lalan'ito ady ito, raha araka ireo hevitra manala baràka tahaka ny an'ny “LeGuillotin's” tao ambanin'ny tatitra nataon'i eldario.es:
Hita taratra fa andiam-biby tokoa, fa angamba kokoa andian-janak'omby, boriky, na koroka nivangongo izay mieritreritra fa avy amin'ny fanaovana tabataba mafy no hahatonga azy ireo hiavaka ambonin'ny lalàna sy ny fiheverana azy ireo ho tsy manantsiny. Fa ny tsy notenenin'izy ireo dia niaraka tam-pifaliana tamin'ilay “manada” iray hafa ilay tovovavin'ny Pamplona mandra-pahitany ny fahazavana masina dia niteny fa naolana. Vehivavy tsy dia tsara, mba marina…, izay fenitra eny anivon'ireo lehilahy mankahala masiaka ny vehivavy mitia vehivavy tahaky ny ao anatin'ilay lahatsary. Araky ny fitenin'ny Espaniola, tsy misy fonja afaka mitazona haratsiana tahaka izany.